မန်ယူအသင်းမှာ အောင်မြင်မှုရယူခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ပ ကစားသမားများ အပိုင်း(၁)
19 Oct 2018 . 4:42 PM
၁၈၇၈ ခုနှစ်က စတင်ဖြစ်တည်လာတဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း(၁၄၀)အထိ ကြာမြင့်နေပါပြီ။ မန်ယူအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ပြည်ပကစားသမား အများကြီး လာကစားခဲ့ဖူးပြီး အောင်မြင်မှု ရတဲ့သူရှိသလို၊ နာမည်ကြီးပေမယ့် ထင်သလောက် အောင်မြင်မှုမရခဲ့တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ အခုဖော်ပြချင်တာက မန်ယူအသင်းမှာ သမိုင်းတွင်မယ့် အောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ပကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတော့ . . .
၁၀.ဒီဂီယာ David De Gea
မန်ယူအသင်းကို စစရောက်ချင်းမှာ ဒီဂီယာရဲ့အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုသူ ခပ်ရှားရှားပါ။ ဗန်ဒါဆား Van Der Sar ရဲ့နေရာကို အစားထိုးဖို့ ဖာဂူဆန် Alex Ferguson က ဒီဂီယာကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီအစပိုင်းမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် အဲဒီနောက်ပိုင်းကစလို့ အခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဂိုးသမားတစ်ဦးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
Honours at the club: 1 x Premier League, 1x FA Cup, 1 x EFL Cup,3x Community Shield, 1 x Europa League
၉.ပက်ဂျီဆန် Park Ji-sung
ဒီတောင်ကိုရီးယားသားကတော့ မန်ယူအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အောင်မြင်မှုအများဆုံး အာရှကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ရမယ်။ “အဆုတ်(၃)ခုနဲ့ လူ” ဆိုပြီးတော့ တင်စားခံခဲ့ရသူ ပက်ဂျီဆန်ဟာ တစ်ကွင်းလုံးကို မမောမပန်း ပြေးလွှားကစားတတ်သူဖြစ်ပြီး မန်ယူအသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် ပက်ဂျီဆန်က မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်နေဆဲပါ။
Honours at the club:4x Premier League,3x EFL Cup,4x Community Shield, 1 x UEFA Champions League, 1 x FIFA Club World Cup
၈.ဗန်ဒါဆား Van der Sar
မန်ယူကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဗန်ဒါဆားရဲ့အသက်က (၃၅)နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီး ဝေဖန်ခံခဲ့ရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗန်ဒါဆားဟာ မန်ယူအသင်းဂိုးပေါက်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပြပြီး ‘Age is justanumber’ အသက်အရွယ်ဆိုတာက နံပါတ်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြသခဲ့တယ်။ မန်ယူဂန္ထ၀င်ကြီး ရှမိုက်ကယ် Peter Schmeichel လိုပဲ ဗန်ဒါဆားကို မန်ယူအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Honours at the club:4x Premier League, 1 x EFL Cup,3x Community Shield, 1 x UEFA Champions League, 1 x FIFA Club World Cup
၇.အီဗရာ Patrice Evra
မန်ယူအသင်းရဲ့ ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်က အီဗရာ မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း ရုန်းကန်နေရတာကို ပရိသတ်တွေ အသိပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ Overlap ၊ Defending Skill ဘာမှပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်တဲ့ နောက်ခံလူတစ်ဦးပါ။ သူ့လိုကစားသမားမျိုး မန်ယူ ထပ်မံပိုင်ဆိုင်ရဖို့ဆိုတာက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ ကြာမြင့်ဦးမယ့်အနေအထားပါပဲ။
Honours at the club:5x Premier League,3x EFL Cup,5x Community Shield, 1 x UEFA Champions League, 1 x FIFA Club World Cup
“Siberian Bull “လို့ တင်စားရမယ့် ဗီဒစ်ဟာ ဖာဒီနန် Ferdinand နဲ့တွဲဖက်ပြီး Vidic-Ferdinand ခေတ်တစ်ခုကုို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ စတိဗ်ဘရုစ် Steve Bruce နဲ့ ပေါ်လစ္စတာ Gary Pallister အတွဲလိုပဲ ဗီဒစ်-ဖာဒီနန်ခံစစ်အတွဲက မန်ယူအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မန်ယူအသင်းနဲ့ လမ်းခွဲပြီး အခုတော့ ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ အနားယူသွားပါပြီ။
မန်ယူအသင်းမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပကစားသမားတွေထဲက (၅)ဦးကို အပိုင်း(၁)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး အပိုင်း(၂)ဆက်လာမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး . .ပရိသတ်ကြီးရေ . .
မနျယူအသငျးမှာ အောငျမွငျမှုရယူခဲ့ကွတဲ့ ပွညျပ ကစားသမားမြား အပိုငျး(၁)
၁၈၇၈ ခုနှဈက စတငျဖွဈတညျလာတဲ့ မနျယူအသငျးရဲ့ သကျတမျးက နှဈပေါငျး(၁၄၀)အထိ ကွာမွငျ့နပေါပွီ။ မနျယူအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ပွညျပကစားသမား အမြားကွီး လာကစားခဲ့ဖူးပွီး အောငျမွငျမှု ရတဲ့သူရှိသလို၊ နာမညျကွီးပမေယျ့ ထငျသလောကျ အောငျမွငျမှုမရခဲ့တဲ့သူတှလေညျး အမြားကွီးပါပဲ။ အခုဖျောပွခငျြတာက မနျယူအသငျးမှာ သမိုငျးတှငျမယျ့ အောငျမွငျမှုရယူနိုငျခဲ့ကွတဲ့ ပွညျပကစားသမားတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့တှကေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာတော့ . . .
မနျယူအသငျးကို စစရောကျခငျြးမှာ ဒီဂီယာရဲ့အရညျအခငျြးကို အသိအမှတျပွုသူ ခပျရှားရှားပါ။ ဗနျဒါဆား Van Der Sar ရဲ့နရောကို အစားထိုးဖို့ ဖာဂူဆနျ Alex Ferguson က ဒီဂီယာကို ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ချေါခဲ့တာဖွဈပွီး ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီအစပိုငျးမှာ ရုနျးကနျခဲ့ရပမေယျ့ အဲဒီနောကျပိုငျးကစလို့ အခုအခြိနျအထိ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ဂိုးသမားတဈဦးဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။
၉.ပကျဂြီဆနျ Park Ji-sung
ဒီတောငျကိုရီးယားသားကတော့ မနျယူအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး အာရှကစားသမားအဖွဈ သတျမှတျရမယျ။ “အဆုတျ(၃)ခုနဲ့ လူ” ဆိုပွီးတော့ တငျစားခံခဲ့ရသူ ပကျဂြီဆနျဟာ တဈကှငျးလုံးကို မမောမပနျး ပွေးလှားကစားတတျသူဖွဈပွီး မနျယူအသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုတှအေတှကျ အဓိက အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူသှားပွီဖွဈပမေယျ့ ပကျဂြီဆနျက မနျယူပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောဖွဈနဆေဲပါ။
၈.ဗနျဒါဆား Van der Sar
မနျယူကို ရောကျရှိခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ဗနျဒါဆားရဲ့အသကျက (၃၅)နှဈရှိနပွေီဖွဈလို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျတှကေို ကြျောလှနျသှားခဲ့ပွီဆိုပွီး ဝဖေနျခံခဲ့ရသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗနျဒါဆားဟာ မနျယူအသငျးဂိုးပေါကျကို အကောငျးဆုံး ကာကှယျပွပွီး ‘Age is justanumber’ အသကျအရှယျဆိုတာက နံပါတျသတျမှတျခကျြ တဈခုသာဖွဈတယျဆိုတာ ပွသခဲ့တယျ။ မနျယူဂန်ထဝငျကွီး ရှမိုကျကယျ Peter Schmeichel လိုပဲ ဗနျဒါဆားကို မနျယူအသငျးရဲ့အကောငျးဆုံး ဂိုးသမားတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
မနျယူအသငျးရဲ့ ဘယျခွမျးတိုကျစဈက အီဗရာ မရှိတော့တဲ့နောကျပိုငျး ရုနျးကနျနရေတာကို ပရိသတျတှေ အသိပဲဖွဈလိမျ့မယျ။ Overlap ၊ Defending Skill ဘာမှပွောစရာမလိုအောငျ ကောငျးမှနျတဲ့ နောကျခံလူတဈဦးပါ။ သူ့လိုကစားသမားမြိုး မနျယူ ထပျမံပိုငျဆိုငျရဖို့ဆိုတာက အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုအထိတော့ ကွာမွငျ့ဦးမယျ့အနအေထားပါပဲ။
“Siberian Bull “လို့ တငျစားရမယျ့ ဗီဒဈဟာ ဖာဒီနနျ Ferdinand နဲ့တှဲဖကျပွီး Vidic-Ferdinand ခတျေတဈခုကို တညျဆောကျနိုငျခဲ့တယျ။ စတိဗျဘရုဈ Steve Bruce နဲ့ ပျေါလစ်စတာ Gary Pallister အတှဲလိုပဲ ဗီဒဈ-ဖာဒီနနျခံစဈအတှဲက မနျယူအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့တယျ။ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ မနျယူအသငျးနဲ့ လမျးခှဲပွီး အခုတော့ ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားယူသှားပါပွီ။
မနျယူအသငျးမှာ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ပွညျပကစားသမားတှထေဲက (၅)ဦးကို အပိုငျး(၁)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး အပိုငျး(၂)ဆကျလာမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုကွပါဦး . .ပရိသတျကွီးရေ . .